RaceandHistory.com : Using Cholera for Regime Change in Zimbabwe
Using Cholera for Regime Change in Zimbabwe
The Cholera outbreak in Zimbabwe is a direct consequence of the sanctions on Zimbabwe that denies the government resources with which to treat its water supply, health sector and other essential services. The aim of Western powers is to claim that this Cholera outbreak is threatening neighbouring countries, thus is an international crisis warranting international intervention. They aim to topple the government in Zimbabwe to install their puppet, Morgan Tsvangirai.
Western powers hope this regime change exercise would cause a reversal of the Mugabe government's land redistribution program, where land that was previously occupied by an estimated 3000 White farmers has been redistributed to 300,000 landless descendents of Black Africans whose land was stolen by White settlers. They also hope that the destruction of Zimbabwe under President Robert Mugabe sends a strong warning to other African governments of what to expect if they too were to reclaim land that was stolen by White settlers.
Read Zimbabwe Watch for more historical information behind the ongoing attempts to topple the ZANU-PF government. www.zimbabwewatch.com